Ny sakafo sy sakafo lafatra ho an'ny alika samoyed | Alika Manerantany
Samoyeds tena tsara tarehy izy ireo ary tsy ara-batana fotsiny, fa ara-panahy be voninahitra izy ireo.
Raha tsara vintana ianao manana ny iray amin'ireo alika ireo, dia mety efa naheno hevitra tsy mitovy amin'ny mpiompy sy ny mpitsabo biby ianao ahoana no tokony hanomezanao azy io. Ka raha tsy manana traikefa amin'ny alika ianao dia tsara kokoa ny mijery Fanampiana matihanina, fa raha io fanampiana io dia teo amin'ny sehatry ny famahanana alika nandritra ny herintaona latsaka, dia tsara kokoa raha mitady ny loharanom-baovao any an-kafa ianao.
1 Karazan-tsakafo inona avy no homentsika ny biby fiompintsika?
2 Ny famahanana ny Samoyed
3 Inona no tsy omena alika Samoyed
Karazan-tsakafo inona avy no homentsika ny biby fiompintsika?
Eo amin'ny tsena no hahitanao vokatra samihafa sy marika fihinanana alika. Nanaovana fandalinana avokoa ny rehetra, saingy ny kalitao voalohany dia nitaky faharetana lalina jereo ny tena fiatraikany tsara amin'ny alika, satria io karazan-tsakafo io dia novokarina mba hanomezana ny alika ny otrikaina ilaina mba salama ireo. Na izany aza, amin'ny sakafo sasany dia misy sakafo mahavelona indraindray tafahoatra.
Aza adino koa fa tsy maintsy manandrana ireo vokatra samihafa eny an-tsena ianao, satria alika, toa antsika, mety tsy mahazaka na amin'iza na amin'iza na mety tsy handevona tsara an'io sakafo io, ka mitady ny safidy mety indrindra ho azy izy.
Ny famahanana ny Samoyed
Alika samoyeds ary na eo aza ny habeny, tsy alika tia fatratra izy ireo. Izany no antony raha tianao ny alika hihinana tsara, ianao dia tokony afangaro amin'ny ranon-kena na menaka bacon ny sakafony.
Miankina amin'ny karazana alika samoyed anananao dia ho hitanao fa herintaona eo ho eo, satria alika kely io, ho hafa tanteraka ny fitomboany. Ohatra, ny alika dia afaka mitombo sy mihombo haingana be, na mety mitombo nefa tsy mahazo lanja mihintsy.
Raha manana sammy alika sammyAza avela hanakaiky ny tavy izy io, satria ny vatanao no mamolavola azy haingana kokoa. Fa kosa, aza sorohina mihitsy amin'ny fampifangaroana azy amin'ny sakafony na omeo ambiny izay misy tavy, afa-tsy ny hen'omby na ny akoho, satria amin'ity fomba ity dia ho velona lava kokoa ianao, salama ary sambatra.
foana sakafo voalanjalanja Io no fototry ny famahanana ity karazana alika ity. Raha bevohoka ny alikao dia mety ho voamarikao fa manana filan-kanina lehibe kokoa izy, fa tsy midika akory izany hoe tokony hanome sakafo be loatra azy ianao, ny mifanohitra amin'izay kosa dia omeo ampahany kely kokoa ary tazomy ny sakafony araka ny fanaonao foana, satria alika bevohoka mitady sakafo bebe kokoa na avy aiza na aiza loharanom-baovao, fa raha manatanteraka an'io faniriana io ianao dia hanao izay haharatsy ny fahasalamanao ary ho matavy loatra.
Inona no tsy omena alika Samoyed
Aza omena ny taolan'ny alikao, toy ny taolana miandalana perforate ny tsinay. Fa kosa, mitady taolana proteinina Manana an-tsokosoko any amin'ny fivarotana biby izy ireo ary amin'ity fomba ity dia hanome fahafaham-po ny fanirian'ny alika hitsako zavatra ianao, hisorohana ny fahasimban'ny rafitra fandevonan-kanina.
Aza adino fa ny fomba tsara indrindra ahazoana torolàlana momba ny sakafo feno sy mahasalama ho an'ny alikanao mandritra ny androm-piainany dia ny fahazoana izany amin'ny mpamboly matoky. Hanome anao ity ity drafitra fisakafoanana feno, hanoro anao mandritra ny androm-piainany izy ary hilaza aminao izay tokony sy tsy tokony hataonao.
Tokony ho tadidinao koa fa tsy maintsy mitazona fitoeran-drano feno misy foana ho an'ny alikanao ianao, satria mangetaheta foana ireo alika ireo. Azo inoana fa amin'ny voalohany dia ho sarotra aminy ny mampifanaraka ny ranoo, satria tsy mitovy amin'ny an'ny mpiompy azy, fa rehefa mandeha ny fotoana dia ho zatra izany.
Ny olon-dehibe ihany no azonao omena gilasy raha tsy izany amin'ny alika kely.
Tadidio izany ny lakileny hitazomana ny alikanao ho salama tsara Izy io dia mandray an-tanana ireo lafiny rehetra ireo ary mamorona drafi-tsakafo miaraka amin'ny mpitsabo anao na ny mpiompinao tany am-boalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Sakafo sy sakafo sakaizan'ny Samoyeds
Famantarana tena ilaina amin'ny alika